Wedzera Traffic nekuvandudza Publish Times | Martech Zone
Wedzera Traffic nekuvandudza Nguva Yekutsikisa
Muvhuro, October 17, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Sezvatakaramba tichishanda kusvika kuwedzera traffic gore rakapfuura, imwe yenzvimbo dzatakatarisisa yaive nguva yezuva yataive tichitsikisa blog zvinyorwa. Iko kukanganisa kunoitwa nevanhu vazhinji kungotarisa traffic yavo neawa uye kushandisa icho segwara.
Dambudziko nderekuti kuona traffic neawa mune yako analytics inongoratidzira traffic munzvimbo yako yenguva, uye kwete nzvimbo yemuoni. Patakatsemura traffic yedu nenguva yenguva, takaona kuti spike yedu yakakosha mumigwagwa yaive chinhu chekutanga mangwanani. Nekuda kweizvozvo, kana isu tiri kutsikisa pa9AM EST, tatononoka. Kana iwe uri webhusaiti kana blog iri muCentral, Pacific kana dzimwe nguva nguva ... iwe uchazoda kuronga posvo yekurova na7: 30 AM kusvika 8AM EST kutyaira kwakanyanya traffic uye kugarisana kugovana.
Saizvozvo, sezvatinotarisa kuburitsa posvo masikati, tinofanirwa kuona kuti hatizviite mushure me5PM EST, kana zvikasadaro vanhu vazhinji havazoone posvo kusvika zuva rinotevera. Dai isu taizotsikisa matatu maposta pazuva, taizoda kuabuditsa kare pane kuti gare gare kuti tiwedzere kuburitswa kwezvirimo. Kana iwe uri munzvimbo yePacific, iwe uchazoda kutsikisa pakati pa3: 4 AM PST na30PM PST! Saka… iwe unonyanya kudzidza kuronga masisitimu kunze kwekunge iwe uchida kurasikirwa nehope!
International Meseji Yemeseji Mameseji
Gumiguru 17, 2011 pa 9:33 AM
Mutengi nguva pfupi yadarika akabvunza nguva yakanakisa yekugovana zvirimo. Uyu mubvunzo wakanaka uye unogona kusiyana zvichienderana nevateereri vanotarisirwa. Kana iwe uchifarira mhomho yekoreji, ivo vari kubhurawuza pawebhu panguva dzakasiyana pane 9-5'ers. Kubheti kwako kwakanyanya kuita kumwe kuyedza kuti uone kuti chii chinoshanda zvakanyanya.
Gumiguru 17, 2011 pa 10:29 AM
Nick - wakarurama chaizvo. Zvakakwana zvinoenderana nevateereri! Ini ndinongoona vamwe vanhu vachiregeredza nguva dzenguva uye vasingazive kuti pane kuparara kwetraffic patiri kutenderera kubva zone to zone.
Gumiguru 17, 2011 pa 10:46 AM
Musoro mukuru uye unopindirana nezvatinoona. Iwe unoshumirwa zvirinani kutumira pamberi pezuva nezuva traffic pane panguva.
Gumiguru 17, 2011 na9: 49 PM
Ndaona kubatikana kuri nani kuri kuitika mangwanani. kana ndikaronga matweets angu kana facebook zvigadziriso zvebhizinesi rangu kana vatengi vangu. Ndatenda nekugovera iyi Doug.